‘एक दिनमा सय ग्रामभन्दा बढी मासु खानु हुँदैन’ - Action Khabar - Nepali Online News Portal
मोटरहेडका परिमार्जित दुई मोटरसाइकलप्रति ग्राहककाे आकर्षण
बिहीबारसम्ममा बागमती प्रदेश नयाँ सरकार गठनकाे आह्वान
नेपाली फुटवल टीमका प्रशिक्षक अलमुताइरी नेपाल आउन तयार
डा. अरूणा उप्रेति
काठमाडाैं । नेपालीको घर घरमा दसैं भित्रिसकेको छ । दसैंको पहिलो दिन घरघरमा घटस्थापना गरेपछि दसैं सुरू भएको हो ।
दसैंमा सबैभन्दा धेरै मासु कै परिकार पाक्छन् । यहीकारण दसैंमा मासुको खपत अत्याधिक हुने गर्छ । सामान्य समयभन्दा यो समयमा झण्डै १० गुना बढी मासु खपत हुने अनुमान छ । विशेषत फुलपातीको दिन ल्याएको मासु दसैंभरि लगाएर खाने चलन छ । तर, यसरी सेवन गरिने मासु स्वास्थ्यका लागि भने फाइदाजनक हुँदैन ।
मासुजन्य परिकारमा शरीरका लागि आवश्यक प्रोटिन प्रशस्त हुने भए पनि धेरै मासु खानु शरीरका लागि हानीकार हुने पोषणविद् अरुणा उप्रेतीको भनाइ छ ।
एकजना व्यक्तिले प्रतिदिन एक सय ग्रामसम्म मासु सेवन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दाबढी अस्वस्थ मानिन्छ । ‘चाडबाडमा सबै जनासँगै बसेर खानेकुरा खाने मात्रै काम हुन्छ । पकायो खायो जसले गर्दा भोजनमा सन्तुलन कायम हुँदैन्,’ उप्रेती भन्छिन्,’ मिलाएर खायो भने मासु लाभदायक हुन सक्छ, जथाभावी खाँदा हानीकारक हुन्छ ।’
बडादसैंको समय मौसमी फ्लु जस्ता रोगहरूको संक्रमणको जोखिम पनि हुन्छ । बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाले अझ बढी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्छ । मासु आफैंमा अत्याधिक बोसो हुने र पकाउँदा पनि धेरै तेल प्रयोग गरिने भएकोले मासु खाँदा स्वास्थ्यमा असर पुग्ने हुन्छ ।
मासुसँगै दसैंको समयमा मद्यपान गर्दा यो झनै हानिकारक हुन्छ । अझ मासु पकाउँदा आगोमा पोलेर, तारेर पकाउँदा यस्तो खान्कीले मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा क्यान्सर गराउने तत्व शरीरमा उत्पादन गराउन मद्दत पुर्याउँछ । साथै, पाचनप्रणालीमा समेत यसले गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ ।
- २७ आश्विन २०७८, बुधबार १२:१३ मा प्रकाशित
आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ००:१९
कांग्रेसलाई सुदृढ र गुटरहित बनाउन डा. शेखरको विकल्प छैन
१९ असार २०७८, शनिबार १०:३९
सरकारको लापरवाहीले कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्यो : देउवा
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार ११:५०
प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण